मीन राशि Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
मीन, प्राचीन राशि चक्रको सातौं अध्याय हो, राशिफल इकाईको अंशले आउँदै गरेको विजयको परिणामको खुलासा गर्दछ। मीनले दुई माछाहरु लामो फिताले बाँधिएको तस्बिरको रूपमा बनाउँछ। आजको प्राचीन राशिको पठनमा, तपाई कुंडली अनुसरण गर्दै मीनको लागि प्रेम, सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य, र तपाईंको व्यक्तित्वको अन्तर्दृष्टि आफ्नो कुंडलीबाट पाउनुहुन्छ।
तर प्राचीनमा यसको अर्थ के थियो ?
लामो फिता द्वारा जोडिएको दुई माछाको छवि कहाँबाट आयो?
सावधान हुनुहोस्! यसको उत्तरले तपाईंको ज्योतिषालाई अप्रत्याशित तरिकामा खोल्दछ – फरक यात्रामा तपाईंलाई आरम्भ गर्‍यो भने तपाईंले जब आफ्नो कुंडली जाँच गर्नुहुन्छ …
हामीले प्राचीन ज्योतिषको अन्वेषण गरेका थियौ, र कुण्डली कन्या देखि कुम्भ सम्म पुरानो कुंडलीको जाँच गरेपछि हामी मीनको साथ जारी राख्यौं। ताराहरूको यो प्राचीन ज्योतिषमा प्रत्येक अध्याय सबै व्यक्तिको लागि थियो। त्यसो भए पनि यदि तपाईं आधुनिक कुंडली अर्थमा मीन हुनुहुन्न भने पनि, मीनको तारामा रहेको पुरानो कथा जान्न लायकको छ।
तारा नक्षत्रहरुमा मीन
मीन वा मीन गठन गर्ने ताराहरू यहाँ छन्। यस फोटोमा लामो फिताले दुईवटा माछा समात्दै केहि देख्न सक्नुहुन्छ?
मीन बनाउँदै गरेका ताराहरूको फोटो
“मीन” मा भएका ताराहरूलाई एउटा रेखामा जोड्दा पनि माछाको स्वरुप स्पष्ट पार्दैन। शुरुको ज्योतिषीहरूले कसरी यी ताराहरूबाट दुई माछाहरुलाई जोड्ने सोचे?
मीन नक्षत्र ताराहरु रेखा द्वारा जोडिएका
तर यो चिन्ह फिर्ता जान्छ जहाँसम्म हामी मानव इतिहास थाहा छ। यहाँ इजिप्टको डेन्डेरा मन्दिरमा राशि छ, जुन २००० भन्दा बढी पुरानो हो, दुई मीन माछा रातो वृतमा घुमाएको छ। तपाईं दायाँको खेस्रामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कसरी फिताले तिनीहरूलाई एकसाथ बाँध्दछ ।
मीनको साथ डेनडेराको पुरातन मिश्री राशि
तल मीनको परम्परागत छवि छ जुन ज्योतिषले हामीलाई थाहा भए पछाडि बाट प्रयोग गरेका छन्।
ज्योतिष मीन आकृति
दुई माछाको अर्थ के हो?
र फिता जसले उनीहरूको दुई पुच्छरलाई जोड्यो?
मीनको मूल अर्थ
करले देखायो कि माछाको पुच्छरले बाख्राको मृत्यु हुँदै गरेको टाउकोबाट जीवन प्राप्त गर्‍यो। कुम्भले माछामा पानी खन्यायो – पिसिस अस्ट्रिनस। माछाले ती भीडलाई प्रतिनिधित्व गर्‍यो जसले जीवित पानी पाउने थियो। श्री अब्राहमले यो कुरा बुझेका र देखेका थिए जब उनलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो ।
तँलाई आशिष्‌ दिनेहरूलाई म आशिष्‌ दिनेछु, र तँलाई सराप दिनेहरूलाई सराप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्‍वीका सबै कुलले आशिष्‌ पाउनेछन्‌।”
तेरै सन्‍तानद्वारा पृथ्‍वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैंले मेरो वचन पालन गरिस्‌।”
एक ठूलो भीड जसलाई आउँदै गरेको ले छुटकारा दिनुभयो दुई समूहमा छुट्याईयो।
उहाँ भन्‍नुहुन्‍छ: “याकूबका कुलहरूलाई फेरि पुनर्स्‍थापन गर्न र इस्राएलको बाँकी भागलाई फेरि फर्काई ल्‍याउन तँ मेरो दास हुने कुरो तेरो लागि अति सानो कुरो छ। पृथ्‍वीको पल्‍लो छेउसम्‍म तैंले मेरो उद्धार पुर्‍याओस्‌ भनी अन्‍यजातिहरूकहाँ एउटा ज्‍योति पनि म तँलाई बनाउनेछु।”
यशैयाले ‘याकूबका कुलहरू’ (जो यहूदीहरू हुन) साथै ‘अन्यजातिहरू’ को बारेमा लेखेका थिए। यीनीहरु मीनको दुई माछा हुन्। जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ।
उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मेरो पछि लाग, र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका मछुवा तुल्‍याउनेछु।”
येशूका पहिलो अनुयायीहरूले माछाको प्रतीक देखाएर तिनीहरू उहाँकै हुन् भनी जनाएका थिए । यहाँ पुरानो क्याटाकम्बबाट फोटोहरू छन्।
पुरानो चिहानमा ग्रीक अक्षरहरूको साथ माछाको प्रतीक
पुरानो रोमन चिहानहरूमा माछाको प्रतीक
दुई माछा चट्टानमा कुँदिएका
मीनका दुई माछाहरु, याकूबका कुलहरू र येशूलाई पछ्याउने अन्य मानिसहरू जसले येशूलाई पछ्याउछन् उहाँले तिनीहरूलाई बराबर जीवन दिनुहुन्छ । फिताले पनि दुई माछाहरुलाई बराबर कसिलो गरी समात्दछ।
फिता – बन्धन तोडिएको
मीनमा नक्षत्र , फीताले , दुबै माछालाई सँगै बाँध्छ। फिताले दुई माछालाई बन्धक बनाएको छ। तर हामी मेषको बाख्राले आफको कदम फिता तर्फ बढाउदै गरेको देख्छौं। यसले त्यो दिनको कुरा गर्दछ जब मेष राशिले माछालाई स्वतन्त्र गराउनेछ।
राशिमा मीन मेष सँग । मेषको खुर फिता तोड्न आइरहेको
यो आज येशूका सबै अनुयायीहरूको अनुभव हो। बाइबलले हाम्रो वर्तमान बन्धनलाई दुःख, क्षय र मृत्युको बयान गर्दछ। तर अझै आशामा यो बन्धनबाट स्वतन्त्रताको दिनको प्रतीक्षा गर्दैछ (फिताले मीनको प्रतिनिधित्व गर्दै)।
१८.म विचार गर्दछु, कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ, त्‍यससँग वर्तमान समयका कष्‍टहरू तुलना गर्न योग्‍य छैनन्‌। १९.सृष्‍टि बड़ो उत्‍कण्‍ठाले परमेश्‍वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ।२०. सृष्‍टि व्‍यर्थताको वशमा पारियो, त्‍यसको आफ्‍नै इच्‍छाले होइन, तर उहाँको इच्‍छाले, जसले त्‍यसलाई वशमा पार्नुभयो, यसै आशामा, २१. कि सृष्‍टि त्‍यसको आफ्‍नै विनाशको बन्‍धनबाट मुक्त गराइनेछ, र त्‍यसले पनि परमेश्‍वरका सन्‍तानको महिमित स्‍वतन्‍त्रता प्राप्‍त गर्नेछ। २२.हामी जान्‍दछौं, सारा सृष्‍टि अहिलेसम्‍म एकसाथ प्रसववेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। २३.सृष्‍टि मात्र होइन, तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्‍माको पहिलो फल छ, सन्‍तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात्‌ हाम्रो देहको उद्धारको निम्‍ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्र-भित्रै आर्तनाद गर्दछौं।२४. किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौं। अब देखिनेचाहिँ आशा त आशा नै होइन। किनकि देखेका कुराको आशा कसले गर्छ र? २५.तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौं भने, धैर्यसाथ हामी त्‍यसको प्रतीक्षा गर्छौं।
हामी मृत्युबाट हाम्रो शरीरको उद्धारको लागि पर्खिरहेका छौं। यसले थप वर्णन गर्दछ ।
५०.अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्‍दछु, मासु र रगत स्‍वर्गका राज्‍यको हकदार हुन सक्‍दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्‍छ।५१. हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्‍य भन्‍दछु, हामी सबै सुत्‍दैनौं, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ, ५२.एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने, तुरही बज्‍नेछ, र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्‌। अनि हाम्रोचाहिँ परिवर्तन हुनेछ।५३. किनकि यस विनाशी स्‍वभावले अविनाशी, र यस मरणशील शरीरले अमरत्‍व धारण गर्नुपर्छ। ५४.जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्‍व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्‍यो वचन पूरा हुनेछ, “मृत्‍यु विजयमा निलिएको छ।” ५५. “ए मृत्‍यु, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्‍यु, तेरो खील कहाँ?” ५६.मृत्‍युको खील पाप हो, र पापको शक्ति व्‍यवस्‍था हो। ५७.तर परमेश्‍वरलाई धन्‍यवाद होस्, जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्‍टद्वारा विजय दिनुहुन्‍छ।
१ कोरिन्थी १५:५०-५७
मीनको माछाको वरिपरिको फिताले हाम्रो वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्दछ। तर हामी आशावादी छौं मेषको आगमनको लागि जसले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ । मृत्युको बन्धनबाट हुने यो स्वतन्त्रता मीनमा हुने सबैलाई आउँनेछ। मीनको चिन्हले घोषणा गर्‍यो कि येशूको विजयले मात्र हामीलाई जीवित पानी दिनेछ, तर कुहिन, समस्या र मृत्युको बन्धनबाट हाम्रो रिहाइको दिन आउँदैछ।
कुंडली ग्रीक “होरो” (घण्टा) बाट आएको हो र भविष्यसूचक लेखहरूले हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण समय अंकित गरेकाले हामी मीनलाई ‘होरो’ ले अंकित गर्दछौं। माछाहरु पानीमा जीवित छन, तर फिताले बाँधिएको मीन होरो पठन चिह्नित गर्दछ। साँचो जीवन तर पूर्ण स्वतन्त्रताको लागि पर्खँदै।
२.तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभाघरहरूबाट निकालिदिनेछन्‌। वास्‍तवमा यस्‍तो समय आइरहेछ, जब तिमीहरूलाई हत्‍या गर्नेले परमेश्‍वरको सेवा गर्दैछु भनी ठान्‍नेछ। ३.तिनीहरूले यी काम गर्नेछन्, किनभने तिनीहरूले पितालाई चिनेका छैनन्, र मलाई पनि चिन्‍दैनन्‌।४. तर यी कुरा मैले तिमीहरूलाई बताएको छु, कि जब त्‍यो समय आउँछ, तब तिमीहरूलाई के भनेथें सो तिमीहरूलाई स्‍मरण हुनेछ। पहिले नै मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनिनँ, किनकि म तिमीहरूसँग थिएँ।
११. “जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभाघरहरू, शासकहरू र अधिकारीहरूका सामु ल्‍याउँछन्, तब तिमीहरूले कसरी र के जवाफ दिने, अथवा के भन्‍नुपर्ने, सो फिक्री नगर, १२. किनभने त्‍यसै बेला तिमीहरूले के भन्‍नुपर्ने हो पवित्र आत्‍माले तिमीहरूलाई सिकाउनुहुनेछ।”
लूका १२: ११-१२
हामी कुंभको समयमा र मीनको समयमा पनि बाँचिरहेका छौं। कुम्भले माछालाई जीवन दिनको लागि पानी (परमेश्वरको आत्मा) ल्यायो। तर हामी राशि कथाको बिचमा मात्र छौं र अन्तिम धनु विजय भविष्यमा अझै आउन बाँकी छ। येशूले भविष्यवाणी गर्नुभए अनुसार अब यस घडीमा हामी समस्या, कठिनाइ, सतावट र शारीरिक मृत्युको सामना गरिरहेका छौं। फिताहरूले माछा समातेका वास्तविक हुन्। तर हामी अझै पनि जीवित पानी चाख्न सक्छौ जबकि अस्थायी रूपमा फिताद्वारा समातिएको छ। मृत्युको मुखमा पनि पवित्र आत्माले बास गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ र डोर्याउनु हुन्छ। मीनको समयमा स्वागत छ।
तपाईंको मीन अध्ययन
तपाईं र म निम्न साथ आज मीन राशिफलको अध्ययन लागू गर्न सक्दछौं। मीन राशिफलले घोषणा गर्दछ कि राज्यमा प्रवेश गर्न तपाईंले धेरै कठिनाइहरू पार गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा त्यो राज्यको लागि तपाइँको यात्राको केहि सामान्य लक्षणहरू समस्या, कठिनाइ, कष्ट र मृत्युसमेत हुन्। यसलाई निराश नहुनुहोस्। यो वास्तवमै तपाईंको फाइदाको लागि हो किनकि यसले तपाईंमा तीन विशेषताहरू विकास गर्न सक्छ: विश्वास, आशा र प्रेम। मीनको ब्यान्ड(फिता)ले तपाइँमा यो गर्न सक्दछ – यदि तपाइँले हृदय हार्नु भएन भने । यद्यपि बाहिरी रूपमा तपाईले बर्बाद गर्दै हुनहुन्छ, तर भित्रपट्टि तपाई दिनहुँ नयाँ हुँदै जानुहुन्छ। यो किनभने तपाईंभित्र आत्माको पहिलो फलहरू छन्। त्यसरी नै जब तपाईं भित्रबाट विलाप गर्नुहुन्छ, तपाईंको शरीरको उद्धारको लागि उत्सुकतासाथ पर्खनुहुन्छ, पहिचान गर्नुहोस् कि यी वास्तविक समस्याहरू तपाईंको भलाईको लागि काम गरिरहेछन् यदि तिनीहरूले तपाईंलाई राजा र उहाँको राज्यको साथ अनुकूल बनाए भने।
यस सत्यको साथ आफूलाई राख्नुहोस्: उहाँको महान कृपामा राजाले तपाईंलाई जिउँदो आशाको रूपमा नयाँ जन्म दिनुभयो जुन मृत्युबाट येशूको पुनरुत्थान हुन्छ, र यस्तो सम्पदामा देखा पर्दछ जुन कहिल्यै नाश हुन वा बिस्तारै हराउन सक्दैन। यो उत्तराधिकार तपाईंको लागि स्वर्गमा राखिएको छ, जो विश्वासको माध्यमबाट परमेश्वरको शक्तिले ढाकिएको छ उद्धारको आगमनको लागि जुन अन्तिम समयमा प्रकट हुन तयार छ। यी सबैमा तपाईं धेरै रमाउनुहुन्छ, यद्यपि केही समयको लागि तपाईंले सबै प्रकारका परीक्षाहरूमा दुःख भोग्नुपर्नेछ। यसले तपाईंको विश्वासको सत्यतालाई प्रमाणित गर्दछ – जुन सुनभन्दा पनि ठूलो, जुन आगोले परिष्कृत भएता पनि नष्ट नहुने हुन्छ। तिनीहरू राजाको आगमनमा प्रशंसा, महिमा र सम्मानमा परिणाम पाउँदछन्।
थप मिन राशि कथा मार्फत र मीनको गहिरो अध्ययन
यो छुटकारा कसरी मिल्छ हामी मेषमा देख्छौं। यहाँको ज्योतिषा ज्योतिषको आधार सिक्नुहोस्। कन्याको साथ यसको सुरुवात पढ्नुहोस्।
मीनसँग मिल्दो थप लेख पनि पढ्नुहोस्:
पुनरुत्थान: नयाँ जीवनको पहिलो फलहरू
येशू निको पार्नुभयो: दासत्व र छुटकाराको पूर्वानुमान
ओम देहमा : लुकाइएको शक्ति देखा पर्‍यो
जीवनको उपहार बुझ्ने र प्राप्त गर्ने
रामायण भन्दा उत्तम प्रेम कथा
लेखक Ragnarप्रकाशित 04/06/2021 04/06/2021 श्रेणिया ज्योतिषा (Jyotish)टैग्स दैनिक राशिफल, मीन कुंडली, मीन नक्षत्र, मीन महिना, मीन मीन, मीन राशि, मीन राशि चिन्ह, मीन राशिफल, राशिफल भनेको के होप्राचीन मीन राशिको तपाईंको मीन राशी पर एक टिप्पणी छोड़ें